သိဝူး .. သိဝူး .. ဘာမှ သိဝူးးးး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သိဝူး .. သိဝူး .. ဘာမှ သိဝူးးးး
သိဝူး .. သိဝူး .. ဘာမှ သိဝူးးးး
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 3, 2012 in Creative Writing | 25 comments
တစ်ရံတစ်ပါး၌ ကျွန်ုပ် မောင်အံစာတုံး သည် နတ်သမီးမျှ လှပချောမောသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်အား တော်ကီပွားရန် အလို့ငှာ ကြံရွယ်နေမိလေ၏ …
(ဤကား နိဒါန်း ….)
ကျွန်ုပ်သည် မှောက်၍တစ်ဖုံ၊ လှန်၍ တစ်ခါ၊ လျောက်လျက် တစ်လဲ၊ ဆေးလိပ်ကို ခဲလိုက်ဖြင့် စိတ်ကူးအတွင်း ဇာတ်ကွက်ချနေမိလေ၏ ..
“ဟေ့ …” ဟူ၍ စခေါ်ရင် ကောင်းမလား ??????
“ဟိတ် …” ဟူ၍ စခေါ်ရင် ကောင်မလား ??????
ခက်သည်က သူမ၏ အမည်နာမအား ကျွန်ုပ် မသိခြင်းပင် ဖြစ်လေသည် …
သို့တစေ နာမည် မသိ၍ ကိစ္စမရှိ။ အဓိကမှာ နှစ်လုံးတည်းသာ ဖြစ်လေ၏ …
ဟုတ်၏ … သူမအား “ချစ်သည်” ဟူ၍ ပြောလိုက်ဖို့ပင် ဖြစ်လေသည် ..
ဤသို့ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ယတိပြတ် ဇာတ်ကွက် ချပြီးသည့်နောက် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်လိုက်လေတော့၏ …
ဤသို့ သုံးနှုန်းပါက ကျွန်ုပ် လွန်အံ့ မထင် …
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အဆိုတော်ကြီး တွံတေးသိန်းတန်ပင် “စစ်ပွဲတစ်ရာ နွှဲလိုက်ချင်ရဲ့ .. ♪ .. ♫ .. အချစ်တစ်ပွဲတော့ မနွှဲချင်တော့ဘူးကွယ် .. ♫ .. ♪ .. တူးနှယ် .. တူးနှယ် ..” ဟူ၍ သီဆို ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်လေ၏ …
သို့တစေ .. ကျွန်ုပ်၏ တိုက်ပွဲကား မစသေး …
“ယိ … ယား .. ကျား …”
ကျွန်ုပ်သည် အခန်းတံခါးအား အလုံပိတ်၍ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးရှေ့တွင် လေ့ကျင့်နေခြင်း ဖြစ်လေ၏ …
သေတ္တာ အတွင်းမှ အဝတ်အစားများမှာလည်း ကုန်လောက်လု နီးနီး ဖြစ်နေလေပြီ ..
သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်ကား စိတ်တိုင်း မကျနိုင်သေး …
အရေးထဲ … တိုင်ကပ် နာရီအားလည်း လှမ်းကြည့်ရသေး ….
သို့ဖြင့် နောက်ဆုံး၌ ကျွန်ုပ်သည် စိတ်တိုင်း အကျဆုံးဟု မယူဆနိုင်သော်လည်း … အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါပဲလေ ဟူသော စိတ်ဖြင့် …
အောက်က ဘောင်းဘီအတို ကြပ်ကြပ်၊ အပေါ်ဂ လက်ပြတ်အင်္ကျီ အနီရောင်ကို ဆင်မြန်းပြီးနောက် ဦးထုပ် အနက်ကျား တစ်လုံးအားလည်း ဘေးလွှဲ အနေအထားဖြင့် ဆောင်းလိုက်လေတော့၏ …
ကျွန်ုပ်ကား လွန်စွာ တောင့်၍ ဖြောင့်သော လူတစ်ယောက် ဖြစ်သည့်အတွက် စမတ်ကျ၍ နေတော့၏ …
သို့ဖြင့် အသင့် ပြင်ဆင်ထားသော လွယ်အိတ်အား လွယ်လျက် တိုက်ပွဲဆီသို့ ဦးတည် ထွက်လာခဲ့လေတော့၏ …
သူမ ထံမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် သာယာနာပျော်ဖွယ် အသံသာလေးများသာ ဖြစ်ပါတော့၏ …
“ရှင်က ဘာပြောတယ်၊ ပြန်ပြောစမ်းပါဦး”
“ဟို .. ဟိုလေ .. ဒီဂ မဟိုဒင်းကို ကျနော်က ဟိုဒင်း ချင်လို့ပါလို့ ပြော .. ပြော ..”
“တော် … တိတ် …၊ ရှင်က ကျမကို ဘာကောင်မများ မှတ်နေတုန်း”
“ဘာကောင်မ မှ မှတ်ပါဘူး ..၊ ဟိုလေ .. ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် မဟိုဒင်းက တိရစ္ဆာန် အကောင်ပလောင်တွေနဲ့ တူတာဆိုလို့ အမွေး .. အမွေး ပေါက်တာပဲ တူ .. တူ “
“ဘာ …. ရှင့် .. ရှင်တော့ လွန်ပြီနော် .. ဟင်း .. ဟင်း “
သူမ ၏ စကားသံတို့သည် ဒေါသများဖြင့် လွှမ်းနေပါလေ၏။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ရိုးသားစွာ ချစ်ခွင့် ပန်ခြင်းသာ ဖြစ်လေသော်လည်း သူမကတော့ လက်သင့်မခံ …
ကျွန်ုပ် ရင်မောရလေပြီ။ ဘယ်လို ပြောရပါ့ …
ဤသို့ ကျွန်ုပ် အဝေးသို့ငေး၍ ပြောရမယ့် စကားများအား တွေးမိနေစဉ်မှာပင် …
“ကတောက် !!!!! ဘောက် … ဘောက်”
သူမ၏ ကျယ်လောင်သော တောက်ခေါက်သံနှင့်အတူ မြေကြီးကို ဆောင့်နင်း၍ ထွက်သွားသံတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ နားဝသို့ တိုးဝင်လာလေ၏ …
ကျွန်ုပ် မနေသာတော့ …
“ဟေ့ … ဟိတ် .. နေ .. နေဦးလေ … မင်းကို ဟိုဒင်း .. ဟိုဒင်း …”
ကျွန်ုပ်၏ အသံအား အောင်မြင်ပေစွတကား ….
သူမ၏ ခြေလှမ်းတို့ တုန့်ခနဲ ရပ်သွားလေ၏ …
ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်ဘက်သို့ ပြန်လှည့်လေ၏ …
ကျွန်ုပ်၏ အသံအား ဤမျှ စွမ်းလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ပင် ထင်မှတ်မထားမိပါပေ …
“ဘာရှင့် … “
သူမ၏ မျက်လုံးတို့သည် ဒေါသတို့ဖြင့် အရောင်တောက်နေလေ၏ …
“နောက်အခါ ရှင့်ရဲ့ ဟိုဒင်း ဆိုတဲ့ စကားကို ထပ်မပြောပါနဲ့၊ စောစောစီးစီး ကျက်သရေကို မရှိဘူး”
“မဟုတ် .. မဟုတ်ပါဘူးဗျာ .. ကျနော် ဟိုဒင်း ချင်တယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို ဟိုဒင်း ချင်လို့ပါ”
“ရှင် .. ရှင်နော် … နောက်အခါ ထပ်ပြောရင် ကျမ အဆိုး မဆိုနဲ့”
“သူများတွေ ဟိုဒင်း သလို ကျနော်လည်း ဟိုဒင်းချင်တာ ကျနော် လွန်သလားဗျာ”
“ဖြောင်း !!!!!!! ဖြောင်း !!!!!!! ဖြောင်း !!!!!!!”
“မှတ်ထား … ကတောက် !!!!! ဘောက် .. ဘောက် .. ဘောက်”
သူမ ကျောခိုင်း၍ ထွက်သွားသံကို အတိုင်းသား ကြားလိုက်ရလေသည် …
သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်၏ အမြင်အာရုံ၌ကား ကြယ်ရောင် စုံသည့် ကောင်းကင်ယံသာ ဖြစ်တည်နေလေ၏ ….
ကျွန်ုပ်၏ အမြင်အာရုံ ရှင်းလင်းချိန်၌ကား သူမသည် ဟိုးးး အဝေးသို့ ရောက်နေလေပြီ …
ပတ်ဝန်းကျင်မှ မျက်ဝန်းများမှာလည်း ကျွန်ုပ်ထံသို့သာ စုပြုံနေကြလေတော့၏ …..
ယင်းနေ့ တစ်နေ့လုံး ကျွန်ုပ် စိတ်ဓါတ်တို့ အတုံးအရုံး လဲပြိုကျခဲ့၏ …
ကြားဖူးသော “တိုက်တယ် … ရှုံးတယ် .. ထပ်တိုက်တယ် .. ထပ်ရှုံးပြန်တယ် .. ထပ်တိုက်ပြန်တယ် .. ထပ်ရှုံးပြန်တယ် .. ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး အောင်ပွဲရရော” ဆိုသည့် စကားများဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတင်းလိုက်ပါသော်လည်း လတ်လတ်ဆက်ဆက် ဒဏ်ချက်က တက်လာသည့် စိတ်ဓါတ်အား ပြန်ကန်ချနေသည် …
ဟူးးးးးးးးး ရင်မောရတယ် ဒေဝီနတ်မိမယ် ….
ကျွန်ုပ်၏ ဇာတ်ကွက်အတိုင်း တာထွက်ခဲ့သော်လည်း တလွှဲတချော်များသာ ဖြစ်ခဲ့လေသည် …
စိတ်ညစ်ညစ်ဖြင့် ကွမ်းတရာ ထုတ်ဝါးလိုက်သည် …
ကွမ်းကုန်တော့ ဆေးလိပ် သောက်သည် ..
ဘာဖြစ်လဲ … မြန်မြန်သေတော့လည်း အေးတာပဲ .. သူမကမှ ပြန်မချစ်ဘဲနဲ့ .. အဟင့် .. ရွှတ် ..
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ကြိတ်မှိတ် အိပ်ပစ်လိုက်လေသည် ….
သို့ရာတွင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေက အတွေးကို နှိပ်စက်သည် ..
သို့နှင့် ကျွန်ုပ်သည်လည်း ခေါင်းအုံးအား ခေါင်းပေါ်သို့ ဖိရင်းဖြင့် ခုလို ကျုံးအော်လိုက်လေတော့၏ …
“သိဝူး .. သိဝူး .. ဘာမှ သိဝူးးးး”
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက် တစ်နှစ်ခန့် ကြာသောအခါ မြန်ပြည်တစ်ဝှမ်း ဟုန်းဟုန်းတောက် ကျော်ကြားသော ကဗျာဆရာ တစ်ဦး ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေ၏ …
တစ်နေ့သ၌ အဆိုပါ ကဗျာဆရာထံသို့ လွန်စွာ လှပသော မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်သည် ရောက်လာလေ၏ ..
ထို မိန်းမပျိုလေး ရောက်သွားသည့် အချိန်တွင် ကဗျာဆရာမှာ ခေါင်းကို ငုံ့လျက် ကဗျာတစ်ပုဒ်အား စပ်စီနေသည် အခိုက် ဖြစ်လေသည်
“ဒီက အကိုက ကဗျာဆရာ xxxx လားဟင် ???”
ယင်းသို့ မေးလိုက်သော အခါ ကဗျာဆရာမှာ တစ်ချက်မော့၍ ကြည့်လိုက်လေ၏ …
မိန်းမပျိုလေးအား မြင်ရလိုက်သောအခါ ၎င်းကဗျာဆရာ၏ ပါးစပ်သည် အဟောင်းသား ဖြစ်သွားလေ၏ …
အနီးအနားတွင် ရှိနေသော ယင်ကောင်တို့မှာလည်း ဟနေသော ကဗျာဆရာ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ အတိုင်းသား ဝင်သွားကြလေ၏ ..
ယင်များသာ မဟုတ်၊ ခြင်များလည်း ပါလေ၏ ….
ကဗျာဆရာမှာကား မလှုပ်မယှက် …
မိန်းမပျိုလေးမှာလည်း ကဗျာဆရာ၏ မျက်နှာအား မြင်လိုက်ရချိန်တွင် ၎င်းကဗျာဆရာအား ကြည့်ရင်း အံ့အားသင့်လျက် …
လျက် …. လျက် … လျက် ….
နောက်ဆုံးတွင် မလှုပ်မယှက် ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်နေသော ကဗျာဆရာမှ ရုတ်တရက် ဤသို့ အော်ဟစ်လိုက်လေတော့၏ …
ဤတွင် ပြီး၏ ……။
(ဘာရယ် ဟုတ်ပါဘူး .. ရေးမိရေးရာ ဟိုရောက်ဒီရောက် လျောက်ရေးလိုက်တာပါ … အစက ရေးပြီး ပြန်ဖျက်ပစ်မလို့ပဲ .. ဒါပေမယ့် ထူးဘာဘူး ဆိုပြီး တင်လိုက်တာ .. အားပေး ဖတ်ရှုသူအပေါင်းအား ကျေးဇူးပါလို့…)
ကောင်းခန်းလေးရောက်မှဗျာ ၊ ဟင်းးး
ဟိုဒင်း ကို ဟဝါ ပြုရင် သည်အတိုင်းမကောင်းဘူး ။ ဆီလေးနဲ့ မှ ကောင်းတာ
( လူထုဦးလှ ၏ ကျောင်းကန်အနီးမှ မြန်မာ့ပုံပြင်များ )
ကဗျာဆရာအော်လိုက်တော့ ခုနပါးစပ်ထဲဝင်သွားသော ခြင်၊ယင်များ လန့်၍ပြန်ထွက်ပြေး သွားကြပါကြောင်း။
ဤသို့ ဖြင့် ကဗျာဆရာ ကိုဟိုဒင်း တစ်ယောက် ကြယ်တွေ ပျောက်သောည သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားလေ သတည်း ။ သို့သော် သူကား ဆန်ပြုတ် မသောက်ရသေး သ၍ ဇွဲလျှောမည့်ပုံ မပေါ်ပါ ။ သူမ က မူ နောက်တကြိမ် အတွက် သံလက်အိတ် ( ၂ ) ကီလို ဝယ်ထား ပြီးဖြစ် လေသတည်း ။
ဟိုဒင်းချစ်လို့ ဆိုမှတော့ အကိုရေ……
ဟား ….. ဟား …….. ဟား……… (အသံကျယ်ကြီးဖြင့်ရီသံ)
သူ့ကိုယ်သူများတောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တဲ့ ……… ၀တ်ထားတဲ့ပုံကိုက ဘောင်ဘီအကြပ် အကျီင်္အရောင် ကလဲ တောက်တဲ့အရောင် ဦးထုပ်ကလည်း မြင်းကျား …… စကားပြောတာက အဆင်မပြေ နည်းတောင်နည်းသေးတယ် ……… ကောင်မလေးတပ်ခေါက်လိုက်တာ ……….
တိုးတိုး ပြောပါ မာမီရယ် ..
အနော့ဂို မမြင်ဖူးတဲ့လူဒွေ အဲ့ဂလို (တောင့်ဖြောင့်)
အထင်မှားသွားရင်လည်း နည်းမှတ်လို့ ..
သို့ဂလိုကြောင့်ပါ .. အဟဲ ..
ဟိုဒင်းဟိုဟာချင်တာကို ဟိုလိုသွားပြောတာကိုးဗျ။အဲတော့ ဟိုလိုဗျင်းခံရတာနည်းတောင်နည်းသေး:mrgreen:
နာလဲ ဘာမှသိပါဝူး ဝင်အားပေးသသွားတာပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုယ်တွေ့မို့
ဤသို့ ပြောရခြင်း ဖြစ်လေ၏ …
ကဗျာဆရာ အကျော်အမော်တောင် ဖစ်သွားလိုက်သေး ဟိ။
ခုလို လာရောက်ကာ အားပေးသွားတဲ့
ချစ်တဲ့ ရွာသူားအပေါင်းအား ကျေးကျေးဘာလို့ ..
သူငယ်အံ ဒီနေ့ကစပြီး ဆရာဝန်ပြောင်း ဆေးပြောင်းသောက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်
ခုလို အကြံပေးဒါ ကျေးကျေးဘာ ..
အယ် … ဒီနေရာမှာတော့ သိဝူးးး နဲ့တော့ လေ …
ဖတ်ကြည့်ရတာတော့ သေသေချာချာသိပြီးမှ ၀ူးတဲ့ပုံပါဘဲ
ဟိုသင်းလို့ မပြောဘဲ နောက်တစ်ခါကျ အ၀ှာ လို့ပြောင်းပြောကြည့်ပါလား….